‘छक्का पञ्जा २’ ले इतिहास दोहोर्याउला ? « Ramailo छ
‘छक्का पञ्जा २’ ले इतिहास दोहोर्याउला ?
समय : 7:00 am
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सर्वाधिक कमाई गर्ने फिल्मको रुपमा इतिहास कायम गरेको फिल्म ‘छक्का पञ्जा’ को सिक्वेल असोज ११ गते फूलपातीको अवसर पारेर देशका झण्डै एक सय बढी हलहरुबाट प्रदर्शनमा आएको छ । नेपाल प्रदर्शनमा १७ करोडको व्यापार गरेको ‘छक्का पञ्जा’को सिक्वेल ‘छक्का पञ्जा २’ ले के इतिहास दोहोर्याउला ? प्रतिक्षा गरौं ।
जे भएपछि दिपाश्री निरौला निर्देशित ‘छक्का पञ्जा २’ ले संकेत भने शुभ देखाएको छ । एक सय बढी हलहरु पाएको ‘छक्का पञ्जा २’ को मल्टिप्लेक्सका बुधबारका सम्पूर्ण शोहरु शोल्ड आउट भएका छन् । यसले राजधानीका क्युएफएक्कस मल्टिप्लेक्समा सर्वाधिक २४ वटा शोहरु पाएको छ । कथा सस्पेन्स राखिएको फिल्ममा दिपकराज गिरी, प्रियंका कार्की, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, शिवहरी पौडेल, बर्षा राउत, स्वस्तिमा खड्का, स्वरुप पुरुष ढकाल लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । फिल्म निर्माणमा दिपक र दीपासँग विकास आचार्यले पनि सहकार्य गरेका छन् । यो रमाईलो भिडियो हेर्नुस् :